Warka SAMSUNG: Daahfurka, Taleefoonada, Kiniiniyada iyo Waxbadan - Androidsis | Androidsis (Bogga 6)
Samsung Galaxy A6 iyo A6 + ayaa si rasmi ah u yimid Spain
Galaxy A6 iyo A6 + ayaa laga heli karaa maanta laga bilaabo Spain. Ka ogow wax badan oo ku saabsan imaatinka taleefannada cusub ee Samsung dhex-dhexaad ah, kuwaas oo durbaba soo gaaraya Spain maanta.
Samsung Gear S4 waxaa lagu maamuli doonaa xidhashada OS, maahan Tizen
Sida ku xusan wararkii ugu dambeeyay, smartwatches-ka soo socda ee Samsung ee Gear S kala duwan ayaa lagu xoojin karaa xirashada OS, halkii laga isticmaali lahaa Tizen.
Samsung waxaa lagu xukumay inay bixiso 539 milyan oo doolar si ay u nuquliso Apple
Samsung waxay ku qasbanaan doontaa inay bixiso $ 539 milyan Apple. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan ganaaxa ay shirkadda Kuuriya ku heshay koobiyeynta naqshaddii asalka ahayd ee iPhone.
Bixby waxay ku jiri doontaa dhammaan alaabada Samsung sanadka 2020
Dhammaan alaabooyinka Samsung waxay u adeegsan doonaan Bixby sannadka 2020. Ka sii ogow wax badan oo ku saabsan qorshooyinka hanka weyn ee shirkadda Kuuriya ee alaabooyinkeeda si ay u adeegsadaan saaxir.